Mbido Ready4Social weputara uzo ohuru nke ihe nlekota oru nke ndi mmadu | ECommerce ozi ọma
Ihe mmalite Ready4Social weputara uzo ohuru nke ihe nlekota oru nke ndi mmadu
Eva Maria Rodriguez | | Ahịa ahia, elekọta mmadụ media, StartUps na ndi oru itumgbere ahia
The Spanish mmalite Njikere 4Social eweputala ụdị nke ya njikwa elekọta mmadụ na njikwa ọdịnaya. Versiondị ọhụrụ nke ngwa ngwa Ready4social nwere agbanwe imewe na ebe dị nchebe ma kwụsie ike, nke enwere ike ịnweta ma site na kọmputa ma site na ngwaọrụ mkpanaka ọ bụla.
Ngwa ọhụrụ nke Njikere4social Emeela ebumnuche abụọ: n'aka nke ọzọ, iji nghọta eme ihe ngwaọrụ nke mere na ojiji ya bụ nnweta Maka nke ọ bụla onye ọchụnta ego na-enweghị ihe ọmụma nke mmemme ma ọ bụ njikwa nke netwọk mmekọrịta, na, na nke ọzọ, na ọ bụ usoro nkwụsi ike ma dị nchebe nke na-eme ka nchedo data nke onwe na profaịlụ mmekọrịta.
1 Nchịkwa nke netwọk mmekọrịta na onye na-elekọta ọdịnaya, dị mkpa maka ndị ọchụnta ego na SMEs
2 Ihe Ready4social na-enye… na ego ole
3 Njirimara nke Ready4social ọhụrụ
4 Gbalịa ya maka 7 euro ọnwa mbụ
Nchịkwa nke netwọk mmekọrịta na onye na-elekọta ọdịnaya, dị mkpa maka ndị ọchụnta ego na SMEs
na netwọk mmekọrịta bụ ihe ịtụnanya na ụlọ ọrụ ọ bụla enweghị ike ileghara anya maka ọtụtụ ebumnuche, n'etiti ihe ndị ọzọ n'ihi na ha bụ ụzọ dị mma maka nkwukọrịta Ndị SME y ndị ọchụnta ego enweghị nnukwu akụ. Mana profaịlụ mmekọrịta abaghị uru ma ọ bụrụ na anaghị arụ ọrụ nke ọma. Ọ naghị adị mma. Ọ dị mkpa ka emelitere profaịlụ mmekọrịta anyị iji mepụta onyonyo dabara adaba.
N'echiche a, mee ezigbo nhọrọ na ọdịnaya ọdịnaya na isi. Ready4social na-adụ ọdụ: "Nchịkọta ọdịnaya bụ maka nyocha, nzacha na ịhọrọ isiokwu, onyonyo, vidiyo, wdg, nke masịrị ndị ahịa anyị ma ọ bụ ndị na-ege ntị." Nke a bụ ihe gị na ngwá ziri ezi. Dị ka ha onwe ha na-ekwu: "Ezigbo atụmatụ Social Media, yana ọdịnaya kwesịrị ekwesị, ga-adị mkpa maka ọganiihu nke azụmahịa anyị."
Ihe Ready4social na-enye… na ego ole
Ready4social na-enye ohere zọpụta oge dị ukwuu na njikwa nke netwọkụ mmekọrịta, ịchọta ọdịnaya dị mma maka ndị na-eso ụzọ nke ụlọ ọrụ ahụ yana maka ndị ahịa ha. Oge bụ akụ dị oke ọnụ ahịa maka ọchụnta ego, na imefusị ihe dị ukwuu n'ịga netwọ mmekọrịta.
Ngwaọrụ a na-atụ aro ọdịnaya na akụkọ kachasị adọrọ mmasị, ma na-enye ohere ịme nkwenye ha tupu oge eruo, na-ewepụghị nhọrọ nke onye nwe ibe ma ọ bụ profaịlụ iji bipụta ihe ha chọrọ.
Na mgbakwunye, Ready4social na-enye ndị ahịa ya a Ndụmọdụ nkeonwe n’ụzọ free n'ime ụbọchị 60 mbụ iji duzie ndị ọrụ, ọkachasị ndị nwere obere ma ọ bụ enweghị ihe ọmụma banyere njikwa njikwa mmekọrịta.
Otu njirimara dị mkpa nke ọrụ Ready4social bụ na ha na-enye a mmemme Ihe nnwere onwe na nkewa maka netwọ mmekọrịta ọ bụla, ka otu ahụ ghara ịpụta na profaịlụ niile n'otu oge, na iburu n'uche njirimara nke netwọkụ mmekọrịta ọ bụla.
Ọnụahịa ahụ karịrị ihe na-adọrọ mmasị. Ready4social ebubo 20 euro + VAT kwa ọnwa ma gụnye mmelite maka ndụ, na ọnụego ebighi ebi. Ọzọkwa, ọ dịkarịa ala ugbu a, ọnwa mbụ na-efu naanị euro 7 + VAT na ikpe ụbọchị 60 ma, ọ bụrụ na ịchọọghị ya, ị ga-enweta ego gị.
Njirimara nke Ready4social ọhụrụ
Smart ọdịnaya curation engine
Igodo nke Ready4social dị na injinịa ọdịnaya ya nwere ọgụgụ isi, teknụzụ nwere ikike ịhọrọ akụkọ dị mkpa dabere na isiokwu abanyela. Algọridim dị elu nke teknụzụ a jikọtara ozi ọma na ozi nwere ọgụgụ isi dịka ekele, ahịrịokwu ma ọ bụ ama ama ama na vidiyo egwu iji mee ka usoro iheomume dịrị.
Tọ oge magazine nke akwụkwọ
Site na ime ka onye nhazi oge niile rụọ ọrụ ọ ga-ekwe omume enweghị nchekasị, ebe ọ bụ na a ga-ebipụta ọdịnaya bara uru ma dị mkpa kwa ụbọchị. Enwere ike ịhọrọ ọnụọgụ na ọnụọgụ nke ozi wee jiri oge ejiri na netwọkụ mmekọrịta soro ndị ọrụ rụọ ọrụ.
Ihazi usoro kalenda
Na kalenda enwere ike ijikwa mbipụta niile ma hazie oge niile nke izu ma ọ bụ ọbụlagodi ọnwa.
Ready4social gụnyere faili ntanetịime RSS, ọnụọgụ mbipụta, mmelite ikpo okwu yana ọtụtụ njikwa njikwa.
Gbalịa ya maka 7 euro ọnwa mbụ
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịnwale Ready4social ị nwere ike ime ya maka euro 7 ọnwa mbụ site na ịbanye Jikere4social.com.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » Marketing » Ahịa ahia » Ihe mmalite Ready4Social weputara uzo ohuru nke ihe nlekota oru nke ndi mmadu
Kpesa banyere mkpanaka ịzụ ahịa ekwentị
93% nke ndị Spain ga-eji mkpanaka ha zụta site na katalọgụ, mgbasa ozi ma ọ bụ ọmarịcha, dị ka MYMOID